Neken’i Jamaika tamin’ny fomba ôfisialy ny fiainana sy lova napetrak’i Mary Seacole, mpanampy mpitsabo fantadaza nandritra ny ady · Global Voices teny Malagasy
'Mampientanentana sy mahafapo ny nankatoavan'ny firenena ny fiainana sylova navelany'
Voadika ny 29 Novambra 2021 12:00 GMT
Sarivongana fahatsiarovana an'i Mary Seacole, nataon'i Martin Jennings, 2016, eo ivelan'ny hôpitaly St Thomas, Londona. Seacole (1805–1881) dia vehivavy jamaikàna, mpanampy mpitsabo nanampy tamin'ny fandraisana an-tànana ireo naratra ary namonjy aina nandritra ny Ady tao Krimea (1853–1856). Inoana fa ity sarivongana fahatsiarovnaa ity no voalohany tao amin'ny Fanjakana Mitambatra natokana ho ana vehivavy mainty hoditra. Sary an'i Peter O'Connor aka anemoneprojectors tao ami'ny Flickr, CC BY-SA 2.0.
Ny 23 Novambra 2021 dia nambaran'ny governemant ao Jamaika ho Andron'i Mary Seacole, ho fahatsiarovana an'i Mary Jane Seacole (1805–1881), mpanampy mpitsabo tsy nisy ny toa azy, teraka tany Jamaika sady mpandraharaha niavaka nivezivezy fatratra sy nikarakara ireo miaramila nandritra ny Ady tao Krimea, nefa sady niaritra fanavakavahana henjana.
Ny Mary Seacole Trust miorina ao amin'ny Fanjakana Mitambatra no nibitsika ny vaovao, nampiarahana tamin'ny dika mitovy avy amin'ny fanambaràn'ny Governora Jeneraly Sir Patrick Allen:
Fanambaràna miavaka. Nambaran'ny Governora Jeneralin'i Jamaika fa “Andron'i Mary Seacole” 23 Novambra 2021
Arahabaina ny Orina Mary Seacole ao Jamaika izay tompon'ny ezaka nahatongavana amin'izao fanambaràna izao. pic.twitter.com/b8WqCVw2Uk
Ny Orina Mary Seacole, izay naverina nahodina indray tao Jamaika tamin'ny 2020, dia miasa hampitombo ny fahafantarana ireo zavabitan'i Seacole. Zava-mahaliana, Lady Allen vadin'ny governora jeneraly koa, dia mpanampy mpitsabo manana ny maha-izy azy.
Nandritra ilay andro miavaka—izay nomarihan'ireo solontenan'ny Nurses Association of Jamaica (fikambanan'ireo mpanampy mpitsabo avy ao Jamaika), Beverley Lashley mpitantana ny tranombokim-pirenena, ary ny tale mpanatanteraky ny Ivontoeran'i Jamaika, Vivian Crawford—ireo mpikambana avy ao amin'ny Orina, Anna Perkins, Hilary Hickling, sy Sonia Mills dia nametraka fehezamboninkazo fanomezam-boninahitra teo amin'ny Tranombokim-Pirenena ao Jamaika ao afovoan-tanànan'i Kingston, akaikin'ny toerana nahaterahan'i Seacole, tranombahiny iray mitondra ny anarana hoe Blundell Hall. Tao amin'ny lanonana, novakian'i Perkins ilay fanambaràna, izay nilaza hoe:
“anatin'izao indrindra, fotoana isian'ny fiparitahan'ny COVID-19 rehefa niatrika ny fanambin'ny valanaretina mitovy amin'izany ireo matianina amin'ny sehatry ny fahasalamana, fotoana tena mety izao hanamarihana ny nahaterahany, ny fiainany, ny lova navelany ary ny ohatra nasehony…”
Hickling, nandritra izany fotoana izany, nanamarika ny fampiasàna ireo zavamaniry zanatany tao anatin'ilay fanomezam-boninahitra, tamin'ny fanamarihana ny fanapahankevitra “hampiasa izay ananantsika ho fanohanaa ny antsika.” Toa hoe nifankahazatra tsara tamin'ireo voninkazo marobe nentina nanome voninahitra azy i Seacole, isan'ireny ny Portlandia grandiflora sy ny Thrinax parviflora (Broom Thatch).
Nampian'i Mills fa ny sarivongan'i Mary Seacole, “mijoro amim-pireharehana eo amin'ny tokontanin'ny hôpitaly St. Thomas Hospital,” no hany sarivongana maneho vehivavy mainty hoditra nomem-boninahitra tao amin'ny Fanjakana Mitambatra, izay betsaka no natao mba hahatsiarovana azy. Tamin'ity taona ity, ny 23 Novambra, nisy sary iray goavamben'i Seacole nalàna sarona tao amin'ny hôpitaly Guys ao Londona.
Ny filohan'ny Mary Seacole Trust nibitsika hoe:
Andro iray tena manainga fanahy sy mampirehareha tao amin'ny hôpitaly Guys ho an'ny Mary Seacole Trust, nanolorana ny sariben'i Mary Seacole izay mihantona ao amin'ny atrium 2. Tena toy ny azo notsapain-tànana ny tanjak'i Mary amin'ny fanehoana ny fahasamihafàna. Isaorana ny tsirairay nandray anjara tamin'ny #MarySeacoleDay pic.twitter.com/JCG2KItAWI
Dr. Elizabeth N. Anionwu, Profesora Emerita avy ao amin'ny Oniversite Andrefan'i Londona, toerana fanofanana ho Mpanampy Mpitsabo, dia nandray anjara betsaka tamin'ny fahatakarana tsara ny fiainana sy ny vanimpotoana niainan'i Mary Seacole, nanilika ny sasany tamin'ireo anganongano sy resaka tsy mitombina momba an'i Mary, isan'izany ireo fomba fijery diso nilazàna azy ho mpanampy mpitsabo tsy nahazo fankatoavana, tsy nahazo akory maripankasitrahana, raha ny marina, ka tsy mendrika ny hotondroina ho “olomalaza mainty hoditra manana ny tantarany”
Rehefa tafaverina tao Jamaika, Anna Perkins avy amin'ny Orina Mary Seacole nilaza tamin'ny Global Voices tamin'ny alàlan'ny naoty iray WhatsApp fa:
Mampientanentana sy mahafapo ny nankatoavan'ny firenena ny fiainana sy lova navelan'i Mary Seacole! Rivotra iainana matanjaka sy eny rehetra eny izy, izay ny fanahiny mpanao anjoria, mpiahy sy mpandraharaha dia afaka ny ho aingampanahy ho antsika, raha toa ekentsika. Tianay ny hampahafantatra ny tantarany any rehetra any mba ho betsaka, indrindra fa ny tanora, no hahazo aingam-panahy.
Nampiany fa na dia natsahatry ny valanaretina COVID-19 aza ny sasany tamin'ny fandaharam-potoana efa nomanin'ny Orina, dia miezaka izy ny hanome vatsimpianarana ho ana mpianatra roa miofana ho mpanampy mpitsabo mba hanohizana ny asa nataon'i Seacole sy ny lova navelany.
Na dia noraisin'ny Fanjakana Mitambatra aza i Mary Seacole ho “ilay Briton Mainty goavana” (zanaka vehivavy jamaikàna iray “afaka” sy manamboninahitry ny tafika tao Ekôsy izy), toy ny hoe sambatra ihany izy nony farany tonga amin'ilay nosy nahaterahany, izay nilaozany mba hiaina fiainana feno ankamantatra, fotoana elabe tany aloha tany.